Gabadha Kirismaska ​​Cute Loli 145 cm Caannimada Jinsiga Doll Darlene Morris
Dolls Galmo Jinsi ah,Caruus galmo fidsan oo jilicsan,B koob caruusadaha galmada
Brown Curly Hair Girl Girl Christmas 145CM Darlene Morris Hay'ad TPE Jinsi Doll
Save 12% $ 2,073.47 $ 1,836.00
Darlene wuxuu leeyahay rabitaan weyn waana hunguri badan. Waxyaabaha ay ugu jeceshahay waa cunista. Cunnooyinka ugu caansan waa "hilib la gubay" iyo "sashimi" iyo waliba sida "strawberry buffy". Mar kasta oo ay fikirto ama hadasho, waxay had iyo jeer si ikhtiyaari ah iskaga dirtaa ereyada la xiriira cuntada.
Hadaad waligaa jeclayd gabar macaan, adeecsan inay gabadhaada noqoto, waa xulasho fiican. Nin kastaa wuu jeclaan doonaa wejigeeda quruxda badan iyo qaabeynta khiyaanada leh. Badanaa, kalinimada ayaa kaa fogeyn doonta dadka, caruusadaha jinsiga ee cabirkoodu wuxuu kaa caawin karaa inaad dareento jacayl iyo dulqaad.
"Waxaan rabaa inaan weydiiyo, reerkaagu ma leeyihiin geed Kirismas ah, Santa Claus ma ku laaban doonaan gurigaaga? Haddii jawaabtu haa tahay, aad ayaan ugu faraxsanahay inaan aado gurigaaga," Darling ayaa sidaas yidhi.
Waa gabar aad u caqli xun. Hada wali wey horumaraysaa. Iyadu ma fahansana galmada, laakiin iyadu aad bay u xiisaynaysaa arrintaas. Fahamkeeda kaliya ee galmada waa iyada oo loo maro telefishanka iyo internetka. Kirismaska ​​qabow waa uun dhalashadi 19aad ee Darlene Morris. Ma rabto inay dhalasho kale yeelato. Waxay had iyo jeer raadineysaa diirimaadka aad guriga u keento. Sii iyada meel ay ku daryeesho oo ay ku korto. Adduunyada idinkaa iska leh laba idinka oo keliya.
Iyadu waa doll dhab ah. Duub bunni dheer ah iyo indho waaweyn oo dhalaalaya saafi ah. Kirismaskaani waa sanadguuradeedii 19aad. Kani waa caruusad jinsi ah oo qurux badan leh dhererkeeduna yahay 145 cm, bus ah 80 cm, wareega dhexda oo ah 51 cm iyo cabirka sinta oo ah 83 cm. Maqaarkeedu wuxuu ka samaysan yahay walxaha TPE, oo kuu oggolaanaya inaad la kulanto taabashada ugu macquulsan. Guri u kaxee, ka qoomamayn maysid.
1 * caruusad
1 * usha kuleylka jirka hoose
1 * dhaqe siilka
1 dhar ah
1 * buste
1 * galoofisyo
1 * tilmaamaha tilmaamaha
Dhererka ： 57 inji (145cm)
Miisaan ： 63 lbs (28.7kg)
UstDayaanna ： 31 inji (80cm)
Dhexda ： 20 inji (51cm)
Dhererka cagaha: 8.1 inji （20.5cm）
Size xirxirida: 55.2*17*11.1 inches（140*43*28cm）